Iqela likaHacker liphande ngokubiwa kwezigidi ngezigidi zeedola kubuGcisa be-Elektroniki | Iindaba zeGajethi
Iqela likaHacker liphande ngokubamba izigidi zeedola kubuGcisa be-Elektroniki
Kuyabonakala kwaye njengoko bekuxeliwe, namhlanje i-FBI izakuphanda RANE Uphuhliso, Iqela elidumileyo labagculeli ekubonakala ukuba ibingumbhali wobuqhetseba abebenokuphatha ngabo weba izigidi ezininzi zeerandi kubuGcisa be-Elektroniki ngomdlalo webhola ekhatywayo owaziwayo FIFA. Iqela labaphangi liya kuba namalungu amane aza kuthi kungekudala azame eTexas (eUnited States) ngokwenza iyelenqe lokwenza ubuqhetseba ngombane.
Njengoko uxelelwe KotakuIsicwangciso-qhinga eliya kuthathwa leli qela labagculeli ukufezekisa iinjongo zabo, yayikukuqhuba uhlaselo ngqo kwiiseva zoBugcisa boBugcisa ukufumana imali ebonakalayo kwimidlalo edumileyo yebhola ekhatywayo. Nje ukuba bayifumane le mali, bayithengisa kubathengisi abamnyama eYurophu nase China. Obu bubungakanani bobusela obunokuthi, ngokutsho koqikelelo lwe-FBI, iqela labaduni lalinokuba libile phakathi kwe-15 ne-18 yezigidi zeedola.
Iqela labaduni linokuba phakathi kwe-15 ne-18 yezigidi zeedola kwi-Elektroniki yoBugcisa ngeFIFA.
Ukuba awunguye umdlali weFIFA, xelela ukuba ezi ngqekembe zisetyenziselwa umdlalo Thenga iipakethi zomdlali, Ukuvumela abasebenzisi ukuba baphucule abasebenzi bamaqela abo. Le mali ebonakalayo inokufumaneka ngeendlela ezimbini ezahlukeneyo ngaphakathi komdlalo, ukudlala imidlalo kunye nokuchitha imali yokwenyani kwicandelo lokuthenga elikhoyo kumdlalo wevidiyo. Njengoko unokuthelekelela, oku kubangela umsantsa omkhulu wenqanaba phakathi kwamaqela abantu abatyala imali kunye nabo bangenayo.
Umsebenzi waba baphangi kukusisiseko sokuba benze ifayile ye isixhobo esikwaziyo ukuthumela imiqondiso engeyonyani kwiiseva zoBugcisa boBugcisa Kuyenzeka ukuba uvelise iingqekembe zeFIFA ngesantya esiphezulu ngaphandle kwesidingo sokuchitha iiyure kulawulo lwekhonsoli. Ezi ngqekembe kamva zathengiswa kwiqela lesithathu. Lo msebenzi waqala ngaxesha lithile ngo-2013 kwaye uqhubeke de kube ngu-Septemba ka-2015, ngelo xesha i-FBI yangenelela kwiqela lokugenca, ibamba iimoto ezininzi zodidi kwaye iphantse yazizigidi ezi-3 zeedola.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Iindaba zeGajethi » ngokubanzi » software » Iqela likaHacker liphande ngokubamba izigidi zeedola kubuGcisa be-Elektroniki
I-Pokémon iLanga neNyanga, tshintsha yonke into ngaphandle kokutshintsha nantoni na
Iingcebiso ezi-7 zokuba uphumelele ngoLwesihlanu oMnyama ngo-2016